Paul Kagame ma hoggaamiye aragti dheerbaa mise kaligii taliye? - BBC News Somali
Image caption Paul Kagame oo hadal ka jeedinaya shirkii Midowga Isgaarsiinta Caalamiga ah ee Geneva, 12- November, 2008.
Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame, ninka itaalka leh ee afka gaaban, ayaa waxa uu had iyo goorba isu soo muujiyaa nin u ololeeya in adeegsiga baraha bulshada ay tahay hab lagu horumarinayo dimoqoraadiyadda.
Balse dadka kasoo horjeeda waxa ay ku eedaayaan in uun ka mid ah hoggaamiyeyaasha kale ee kaligii-taliyeyaasha ah ee Afrika, kuna guuleysan doono doorashada dhacaysa 4ta Agoosto maadaamaa uu cuburiyey mucaaradka, islamarkaasina laayay dadkii kasoo horjeedey qaarkood, eedeymahaasi oo uu si adag ay u beeniyeen dadka isaga taageera.
Wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii ugu horeeyey ee Afrika ee furtey boggaga bulshada sida Twitter iyo Facebook, wuxuuna Kagame shir ka sheegey in casriga baraha bulshada ay meesha ka saareen wax kasta oo marmarsiimo ah oo ku saabsan "dulqaad la'aan siyaasadeed iyo faqrinimo dadka la bado".
"Dhacdooyinka taariikhda gali doona ayaa waxa markiiba laga diiwaangalinayaa daafaha adduunka islamarka ay wax dhacayaan" ayuu yiri Kagame.
Hadaladiisa ayaa waxa ay si toos ah uga hor imanayaan aragtida ay qabto hay'adda wariyeyaasha aan xudduuda lahayn ee Reporters Without Borders oo Kagame ku tilmaamtay mid ka mid ah dadka gabood-falada ugu waaweyn u geysta xuquuqul qawlka.
8 wariye ayaa la diley, ama la waayay, 11 kale ayaa xabsiyo dhaadheer lagu xukumey, 33 kalana waa laga musaafuriyey Rwanda sida ay hay'addani sheegtey.
"Wax badan ayaa laga qabtay helitaan internetka Rwanda, balse fikrada waxa ay tahay in la maamulo baraha bulshada, waxaana ka mid ah dabogal lagu hayo wariyeyaasha " ayay tiri Clea Kahn oo ka tirsan Reporters Without Borders oo BBC-da la hadashay.
Kagame waxa uu tababar ciidan kusoo qaatay dalalka Uganda, Tanzania, iyo Maraykanka, waxaana loo arkaa nin ku xeeldheere kaartooyinka ciidamada.
Waxa uu qaxooti ku ahaa dalka Uganda illaa yaraantiisii, waxana uu markii dambe ka mid noqdey dadkii asaasay jabhaddii uu madaxda ka ahaa Yuweri Musavani sannaddii 1979-kii.
Wuxuu madax ka noqdey waaxda sirdoonka ee jabhadaasi, isaga oo gacan ka siiyey Musavani in uu xukunka Uganda la wareego sannadkii 1986-dii.
Kadib waxa uu horkacay dhaqdhaqaaqii lagu asaasayay jabhadda Rwandan Patriotic Front (RPF) ee 1994-tii la wareegtey xukunka dalka Rwandan , kadibna soo afjartay xasuuqii halkaasi ka dhacay, kaasi oo lagu diley dad gaaraya 800,000 oo ka tirsan qabiilka Tutsiga ee uu ka dhashay Kagame iyo Hutu qunyar socod ahaa
Image caption Sawirkan waxa uu muujinayaa nin ka tirsan jabhadda Tutsiga oo sigaar shidanaya sanadkii 1994-tii.
Markii uu dowladdii la wareegey, isaga oo markii hore noqdey wasiirka difaaca iyo waliba madaxweyne ku xigeenka ka hor inta uusan madaxweyne noqon ayaa waxa uu Kagame abaabuley kacdoon xukunka looga tuurey madaxweynihii Congo Dimoqoraadic Mobutu Seso Seko's, balse halkaasi kuma dhamaanina waxa uu faraha la galay dagaal lix dal ay ku lug leeyihiin oo Congo ka dhashay.
Rwanda oo lagu eedeeyay in ay dishay 37 ruux oo dambiyo sahlan galay
Image caption Paul Kagame waxa uu doorashadii 2010-kii ku guuleystey 93% codadkii la dhiibtay.
Qoraa ka tirsan wargeyska Financial Times ee London kasoo baxa oo lagu magacaabo William Wallis oo si dhow u darsa Kagame ayaa sheegey in uu ku daydo madaxweynihii hore ee Tanzania Julius Nyerere oo ahaa madaxweyne isku daya in uu xal ka gaaro arrimaha dalalka dariska la ah, kadibna farogalin ciidan ku samayn jirey.
Wuxuu intaasi ku daray in uu saaxiibbo wanaagsan ku leeyahay dalalka Maraykanka iyo UK, sababtana ay tahay in deeqihii dalkiisa loo direy uu si wanaagsan u isticmaalay, isaga oo sidoo kale adeegsaday kooxaha ololeeye ee Maraykanka si ay u difaacaan danaha Rwanda.
Nin falanqeeya arrimaha amniga oo lagu magacaabo Nii Akuetteg oo u dhashay dalka Ghana ayaa sheegey in Kagame uu ka mid yahay saaxiibada kaligiis talisyada ah ee Maraykanka Afrika ku leeyahay, isaga oo farta ku fiiqay in Kagame uu ku tabobartay Maraykanka, islamarkaasina uu xitaa khudbad ka jeediyey mac-hadka caanka ah ee West Point mar uu wiilkiisa ka qalinjabinayay.
Shabakadda Basaasiinta ee xoogga badan ee Kagame uu leeyahay ayaa lagu eedeeyey in ay geysteen dilal qorsheysan iyo afduubyo meelo ka baxsan Rwanda.
Waxaa la sheegey in ay bartilmaameedsadeen madixii hore ee sirdoonka Rwanda Col. Patrick Karegeya oo dalkaasi ka baxsaday kadib markii ay Kagame is qabteen.
Waxaa lagu diley qolkiisa hotel uu ka degenaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika sanadkii 2014-kii.
"Waxay ku daldaleen xarig " ayuu yiri David Batenga oo qaraabo la ah Col. Karegeya.
Image caption Col Patrick Karegeya ayaa u baxsaday dalka Koonfur Afrika sanadkii 2008-dii, kadib markii ay isku dhaceen Kagame.
Inkasta oo Rwanda si rasmi ah u diidey ku lug lahaanshaha dilkaasi, haddana Kagame ayaa meel fagaaro ah ka yiri "suurtogal ma ahan in aad dalkaaga hagardaamayso, haddana aanan lagu ciqaabin, kuwa xitaa wali nool waa la ciqaabi doonaa xili kasta oo ay ahaataba".
Wali isaga oo aaminsan in ay jiraan ajandayaal waddanimo oo ay tahay in uu dhamaystiro, ayuu markii sedexaad u tartamayaa xilka madaxtinimada dalkaasi doorasho dhacaysa 4ta Agoosto, wuxuuna dalkaasi madax kasoo ahaa illaa sanadkii 1994-tii.
Isbadal dastuurka lagu sameeyey sannadkii 2015-kii ayaa Kagame u ogolaanaya in uu xilka madaxweynenimada u tartamo sedex mar oo dheeraad ah si uu xilka usii hayo illaa laga gaarayo sanadka 3034-ta.
Aftida dastuurka waxaa lagu meelmariyey 95% sida ay dowladda sheegtay, balse mucaaradka waxa ay ku doodeen in natiijadaasi tahay mid lagu shubtey.
'Hooyo uur leh oo la xirxirey'
Hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa sheegaysa in doorashdan ay ku dhacayso jawi cabsi oo muddo dheer lagu soo dhaqayay dadka, mucaaradka iyo waliba saxaafadda iyo dadka u dooda xuquuqul insaanka.
Dhacdadii ugu dambeysey oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayaa waxaa ka mid ah haweeney xaamilo ah oo u dhalatay Rwanda, balse heysata dhalashada Britain , taasi oo la xirey bishii Feberaayo sababo la xiriira in ay wax ka sheegtey Kagame, ay bixisey sir qaran, islamarkaasina ay gacan siisey kooxo hubeysan.
Haweeneydani oo lagu magacaabo Violette Uwamahor ayaa waxa ay Rwanda u tagtay si ay uga qeybgasho aaska aabaheed, waxayna rumeysantahay in loo xirey maadaamaa ninkeeda, Faustin Rukundo, uu xubin ka yahay jabhadda la mamnuucay ee Rwanda National Congress (RNC) ee ku kacsan xukunka Kagame.
Lahaanshaha sawirka Uwamahoro
Image caption Mrs Uwamahoro ayaa dib ula kulantay ninkeeda iyo labo carruur ah oo ay dhashay kadib markii xabsiga laga siidaayay.
"Silsilad ayaa la iiga xirey lugaha, gacmahana waa la iga jeebeeyey, waan dhiig baxay xarigga kadib, waxay ila noqotey in ilmaha uu iga soo dilmayo" ayay tiri haweeneydan.
Kagame ayaa waxaa la rajaynayaa in uu ka guuleysto labada musharax kale ee la tartamayay ee kala Frank Habineza ee xisbiga Democratic Green Party iyo Philippe Mpayimana oo ah musharax madax banaan.
Su'aasha kaliya ee la isweeydiinayo ayaa ah in uu dhaafi doonto natiijooyinkii uu ka heley doorashooyinka hore ee kala ahaa 95% oo uu heley sannadkii 2003-dii iyo 93% oo uu heley sannadkii 2010-kii.
Qof ka mid ah dadka ku kacsan Kagame oo London ku sugan , balse magaciisa qariyey ayaa BBC-da u sheegey in dadka Rwanda ay u kala qeybsanyihiin beelo beelo, haddii ay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ahna uusan Kagame guuleysan karin.
Image caption Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame (midig) iyo Nelson Mandela madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika (Bidix).
"Gefka ugu weyn ee uu Kagame gaystay ayaa ah in uu yiraahdo dhammaanteen waxaan nahay reer Rwanda, isaga oo inkiraya halka ay dhibaatada ka dhalatay, oo ah qabiilka, sidee qof u oran karaa qabiil ma jirayo?" ayuu is weeydiiyey mid ka mid ah dadka kasoo horjeeda Kagame.
Balse Kagame oo tusaale wanaagsan u arka dalalka Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa aaminsan in dib-u- heshiista dhabta ah ay tahay in horukac dhaqaale la sameeyo.
Image caption Mr Kagame ayaa sheegey in uu dalkiisa gaarsiiyey xasilooni iyo horumar.
Markii uu xukunka la wareegayay Rwanda waxa ay ahayd mid aad u burbursan, balse dhaqaalaha ayaa sare u kacay, wuxuuna hadda sannad kasta kordhaa 7% , iyada oo uu hoos u dhacay heerka saboolnimad
Waxaa la furey warshaddii ugu horeysey oo daqiiqda shiidda, waxaa la dhisey waddooyin laami ah, waxaa la sameeyey shirkad diyaaradeed, waxaa hadda la dhisayaa garoon diyaaradeed oo ay ku kacayso lacag dhan $800 milyan, iyada oo uu qorshuhu yahay in lagu sii bari-taaro xarun shirar oo ku kacaysa $300 milyan.
"Kagame waa nin hawl-kar ah, waa nin wax hirgaliya, ma ahan nin hadalada iska dhaha sida dadka kale" ayuu yiri Desire Assogbavi oo ka tirsan hay'adda Oxfam.
"Haddii Midowga Afrika uusan wax fulinin, qaaraddani ma hormari karto, waqti kale ayaana naga lumaya oo aan fursado badan qasaarineynaa" ayuuu ku yiri Kagame hadal qoraal ah oo la hordhigay shir madaxeedkii Midowga Afrika ee bishii Janaayo dhacay.
"Tobonaan kun oo dhalinyaro ah ayaa meydadkooda laga helaa badaha, iyaga oo raadinaya nolol wanaagsan , iyaga oo halista u bareeraya sababtoo waxa ay aaminsanyihiin in aysan wax rajo ah u oolin dalkooda, waxay tani tusaale u tahay in ay qasab tahay in aan talaabo degdeg ah qaadno" ayuu intaasi kusii daray.
Sida ay qabaan dadka taageera Kagama, sumcadiisa wanaagsan ee ah nin aragti dheer, islamarkaasina hawl-kar ah ayaa ka dhigaysa in uu ku guuleysto cod aqlabiyad ah.
Balse dadka naqdiya ayaa sheegayaa in uu yahay hoggaamiyeyaasha Afrika ee cubburinta ku caan baxay, taasina ay meesha ka saartay rajadii ahayd in Rwanda ay noqoto dal dimoqoraadi ah oo muwaadhiniinta oo dhan ay ku faani karaan.